Lifepo4 Ibhetri, Lithium Iron Phosphate Ibhetri-Polymer
I-OEM yebhetri kunye neenkonzo ze-ODM zamkelekile
Ngokusekwe kwiimfuno zomthengi, iqela lobunjineli likhethe iiseli, zenza i-BMS, zapakisha iiseli, zaqhuba iimvavanyo. Siyanelisa abathengi bethu ngezisombululo eziphambili. Ukupakishwa okwenziwe ngebhetri ngokweNokia / Samsung / Sanyo / Panasonic / Nokia ibhetri.100% Isiqinisekiso esiqinisekileyo. Nceda unxibelelane nathi ngesilinganiso ESIMAHLA ngeeprojekthi zakho zokupakisha ibhetri.
Inkxaso yeR & D
Njengomenzi onobuchule kukho iinjineli ezimalunga nama-30 kwiqela le-PLM R&D kubandakanya i-5 PHD, i-10 MFD kunye neeBachelors ezili-15. Malunga nezixhobo ezingama-30 izixhobo zokuvelisa ezizenzekelayo, izixhobo ezingama-25 nubit Semi-automatic kunye ne-8 yemigca yemveliso kumzi-mveliso wethu.
Ukuhanjiswa kwangexesha: Kwi-PLM siyaqonda ukuba enye yezona zinto zibalulekileyo zabathengi bethu ziyafika ngexesha. Siyikhathalele inkqubela yethu yokuhanjiswa kweyona nqanaba iphezulu. Umgangatho ogqwesileyo: Ukuqinisekisa iimveliso ezisemgangathweni zezona zibalulekileyo. Esi sesona sizathu sisoloko sikhetha ukutyala imali kwizisombululo eziphezulu zobugcisa kwiziko lethu leR & D. Iimveliso ezizodwa: Kubandakanywa ibhanki yamandla e-thinnest emhlabeni, i-PLM inikezela uluhlu olubanzi lweemveliso ezintle ukuhlangabezana neemfuno zabathengi eziguqukayo kunye neemfuno. Inkonzo entle yabathengi: Enye inkxalabo eqhubekayo ephindaphindiweyo yokuba abathengi bethu babelane nathi ngesidingo samava abathembekileyo kwinkonzo abathengi kwaye siyazikhathalela nayiphi na imibuzo ngaphambi nasemva kokuthengisa.
Ukuphathwa kweSpckSpreadTM yethu
I-Shenzhen Polymer Battery CO., LTD yasungulwa ngonyaka ka-2014, kwaye ngumvelisi weebhetri ze-lithium ion ovelisa imbali engaphezulu kweminyaka emi-5 e China. Ezona mveliso ziibhetri ezinokuphinda zisebenze kwakhona, ibhetri ye-18650 ibhetri, ibhetri ye-e-bhayisekile, iipakethi zebhetri ze-lithium okanye naziphi na iiprojekthi zeebhetri ezenziwe ngezifiso. Sinokubonelela ngesisombululo sinyathelo elinye kunye neemveliso zechungechunge lonke ukusuka kwiibhetri ukuya kwizinto zebhetri njengeemfuno zabathengi.
Iinkcukacha zeMveliso: Ukusetyenziswa: Amathoyizi, umThengi weKhaya ...
Iinkcukacha zeMveliso: Imodeli: PLM18650-4S1P Nominal ...
Amaxabiso emizi-mveliso UL avunyiweyo angama-22.2v 900mah ...
Iinkcukacha zeMveliso: Imodeli: PLM-NH2057QE34 Ibhetri ...
I-CPAP ibhetri efanelekileyo kunye nomboniso wamandla wakha ...
Ukuthengisa okushushu 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ...
Iinkcukacha Product: Model: PLM-36v20ah Ibhetri Pa ...
Ibhetri mveliso ithengisa ngokuthe ngqo i-5000mah 3.7v li -...
Iinkcukacha zoMveliso: Ukwaziswa kweMveliso ye-PL ...
Ukususela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu uphuhlisa iimveliso zodidi lokuqala lwehlabathi ngokubambelela kumgaqo wobulunga kuqala. Iimveliso zethu ndizuze igama elihle kolu shishino kunyetrusttrusty phakathi abathengi abatsha nabadala ...
I-COVID-19 ibangela ukuba ibhetri ibuthathaka, uSams ...
IBattery.com ifunde ukuba i-Samsung SDI, a ...
Ngokwengxelo zeendaba zangaphandle, i ...
Ukunyuka kwamaxabiso e-cobalt kudlule ...
Kwikota yesibini ka-2020, iyonke ...